२६ असोज - बिग्रिन कहाँनेरबाट सुरु हुन्छ भने हामी एनआरएनहरु, आफ्नो दोष देख्न सक्ने त भयौं तर तिनलाई हृदयबाट हटाउने प्रबल इच्छा जगाउनै सकेनौं। हामी आज पनि दोष देख्न सक्ने चरणमै छौं। दोषलाई हृदयबाट हटाउने चरणमा प्रवेश गरेकै छैनौं। हामीले विदेशी ऐनामा आआफ्नो अनुहार हेर्न त जान्यौँ तर अनुहारको दाग हटाउन अझै...
१८ असोज - नोबेल पुरस्कार एउटा प्रहसन हो, यो सत्यको सामना गरौँ। यो लामो समयदेखि नाटक बन्दै आएको छ। साँच्चै नै हामीले ढोङ बन्द गर्नुपर्ने बेला हो यो। मानिसहरु ‘नोबेल शान्ति पुरस्कार’ पाउनेहरु भनेका पाखण्डी र युद्धअपराधीहरु हुन् भन्ने कुरा सोझै भन्न सक्छन्।
१५ असोज - ‘सेभिङ प्राइभेट रायन’जस्ता भीडन्तमाथि केन्द्रित फिल्मले भन्दा आफू निरक्षर भएको कुरा सार्वजनिक हुने भयले जातीय नरसंहारमा संलग्न भएको झुट्टा आरोप स्वीकार्ने ‘द रिडर्स’ कथाले मलाई बढी तान्यो। नेपालमा यस्ताखाले फिल्म बनेका छैनन् भन्दा पनि हुन्छ। माओवादी विद्रोहताकाको सैन्य भिडन्तलाई पृष्ठभूमि बनाएर...
१२ असोज - न्युयोर्क होस् वा सानफ्रान्सिस्को, डलास होस वा भर्जिनिया, दशैं लागेपछि खसी खोज्दै फार्म हाउसतिर लाग्ने नेपालीको संख्या बढ्दो छ। अब त कतिपय फार्म हाउसहरुले नेपालीको खसी किन्ने ‘सिजन’ बुझिसकेका छन्। र त्यहीअनुसार मौका छोपेर मूल्य बढाउन पनि बाठा भइसके।
२९ भदौ - ‘प्रभुजीले धोका दिनुभयो, त्यसैले आइयो साइकल चढ्न!’ उनले हाँस्दै भने, ‘साइकलको सम्भावित उम्मेदवार चैँ केही कार्यकर्तासहित हिजो माओवादी प्रवेश गरे। यहाँ एउटा पार्टीबाट अर्कोमा जानु एकदमै सामान्य हो।’
२४ भदौ - आफूलाई लागेको कुरा साथीलाई भनिरहेको छु भन्ठानेर लेख्ने। यसो गर्दा लेख्न सजिलो हुन्छ। लेखाइ सरल र स्वाभाविक हुन्छ। यसरी लेखेको धेरैले बुझ्छन्। त्यसले धेरैको मन छुन्छ। अनि के चाहियो?
१९ भदौ - हामीलाइ सूचनाहरुले थिचेका छन्। वस्तुहरुले थिचेका छन्। मनोविज्ञानका एकजना प्राध्यापक डानियल लेभिटिनले ‘अर्गनाइन्ड माइन्ड’ बारे लेखेका छन्। उनी भन्छन्ः सन १९७६ ताका कुनै औसत ग्रोसरी स्टोरमा नौ हजार प्रकारका मात्र सामान हुन्थ्ये, अहिले चालीस हजार प्रकारका सामान हुन्छन्। जबकि एउटा मान्छेले एकपटकमा एक...
२४ साउन - फोटो देखेपछि पहिलो फोन गरिन रामकुमारी झाँक्रीले– भेना, बुढाबुढी बा–आमालाई त्यस्तो ‘अंश’ दिएर हुन्छ? सेवा गर्नु पर्दैन? गाडीमा चर्को लोकगीत बजेको थियो। म फोनमा हाँसे मात्रै।
बेइजिङमा जब भयो ओठ–सेवाको चर्चा
२३ साउन - ‘ओठ–सेवाले जनताका लागि केही ल्याउन सक्ने छैन अर्थात् लिप सर्भिस् वील ब्रिङ नथिङ टु द पिपुल।’ नेपालमा दुई–चार वर्ष बसेका ती चिनियाँ विद्वानले नेपाली नेताहरूले कसरी ओठे आश्वासन बाँड्ने रहेछन् भन्ने कुरा अरूका सामु फुस्काउनै खोजे।
१८ साउन - आहा! समर लाग्यो क्यारे! बाहिर त टहटह घाम पो लागेछ। मन त यसै चङ्गा। बेलायतमा सधैँजसो जाडो हुने हुनाले पनि समरका केही महिना निक्कै प्यारा हुन्छन्। भनिन्छ, बेलायतमा कुराकानीको सुरूवात नै मौसमको चर्चाबाट गरिन्छ। हरेक मिडियाले छिनछिनमा मौसमको भविष्यवाणी प्रसारण गरिरहेका हुन्छन्।
प्रश्नको भारी लिएर गुरु अघिल्तिर टेक्सासका नेपाली
१७ साउन - गुरुहरु जिपिएस जस्तै हुन्। फरक यत्ति मात्रै हो– अलि बढी साधना गरेका, अध्ययन, अनुभव र शब्दले भरिएका गुरुहरुले देखाउने आध्यात्मिक बाटाहरु सोझा र छिटा हुन्छन्। कम साधाना, अध्ययन, अनुभव र शब्द भएका गुरुले देखाउने आध्यात्मिक बाटाहरु, अलि बाङ्गाटिङ्गा र लामा हुन्छन्।
साझा–विवेकशील एकताका जोर्नीहरु
१६ साउन - यिनले अहिलेसम्म सहरकेन्द्रित समस्यामा मात्रै बहस गरेर राजनीतिक बाटो खनेका छन्। सामाजिक सञ्जालको भरपुर प्रयोग गर्छन्। युवाहरूको उपस्थिति धेरै रहेको सामाजिक सञ्जालमा यी दुवै पार्टीले युवाहरूले नै देश हाँक्नुपर्छ भनेर प्रचार गरिरहेका छन्। यिनको लक्ष्य भनेकै युवाहरुसँग जोडिने देखिन्छ। अहिले नै यसको...
२० साउन - अबोध बालबालिकाले तँ भन्नु सामान्य कुरा होला। तर बुझेर पनि आफूभन्दा ठूलालाई तँ भन्नु हैकमवादी प्रवृत्ति नै हो। यो केवल शाब्दिक कुरा नभई वर्गीय विषय पनि हो। यो प्रसंग एउटा उदाहरण मात्र हो। यससँग मेल खाने अन्य थुप्रै दृष्टान्तहरु हामी जताततै देख्न सक्छौँ।
७ साउन - छाउपडी र छाउगोठ सचेतनाले हट्ला वा दण्ड-सजायले? म त भन्छुः सरकारले छाउगोठ भत्काओस्। सुत्केरी र ‘नछुने’ भएकी महिलालाई घरबाहिर राख्‍ने मूलीलाई अपराधी बनाओस्। तीन महिना जेल हालोस्।
१ साउन - कहिले हामीलाई ती जो धन सम्पन्न छन्, तिनको बानीव्यहोरा, तिनले धन कमाएको तरिका र तिनका हाउभाउ मन पर्दैन। सम्पत्तीको धनीको, धन मात्र मन पर्छ, बाँकी सबै बेकार लाग्छन्। नाम र मनको धनीको, नाम र मन मात्र मन पर्छ, बाँकी सबै बेकार लाग्छन्।
१० असार - जब ग्राहक बारीमा सीधै ताजा तरकारी किन्न जान थाल्छ, बिचौलियाहरु बिच्किन थाल्छन्। र बिचौलिया नबिच्केसम्म ताजगी अलि परको कुरा हुन्छ। विचारका बिचौलियाहरुलाई अब रिस उठाउने बेला भएको छ।
चित्ताकर्षक रारा, अद्भुत यात्रा
८ असार - यसपटक रारा घुम्ने रहरको मूल मुटुभित्र फुटेर आयो। इच्छाहरु यति रसाएर आए कि अनिच्छा र अल्छीका झिल्काहरुका लागि कुनै स्थान रहेन। यसपटकको भ्रमण—योजनालाई योजनामा मात्र सीमित नराखी, वास्तविक भ्रमणमै परिणत गरेर कालान्तरसम्म मीठो सम्झनाका रुपमा सजाउने रहर भयो।
गाई–निबन्धे गाली र खगेन्द्र संग्रौला
२ असार - संग्रौला सामाजिक सञ्जालमा निकै गाली खाने लेखकमा पर्छन्। उनले ट्वीटरमा केही लेख्नेबित्तिकै उनलाई गाली गर्नेहरू जाइलागिहाल्छन्। हिंसाको पक्षपोषण गरेको, भारतीय दूतावासको भाषा बोलेको, रक्सी खाएर लेखेको जस्ता आरोप उनलाई लगाइन्छ। तर, उनको लेखनको अन्तर्य र क्षमता बुझेर धेरै कमले मात्रै प्रतिक्रिया दिन्छन्।
१ असार - मैले सोधेँ, ‘हामीमध्ये को–को खुलेर हाँस्न सक्छौँ।’ प्रायः सबैको उत्तर थियो, ‘धेरै हाँस्ने बानी छैन।’ एकजना अभियन्ताको स्वीकारोक्ति थियो, ‘कुरा त मैले यहाँ आएर क्रान्तिका गरेँ। छोरीहरुलाई अबेरसम्म बाहिर हिँड्न दिन्नँ।’
३१ जेठ - हँसिलो मुहार र नेवारी लवजमा उनले मेरो संक्षिप्त परिचय मागेकी थिइन्। पहिलो भेटमै म उनको व्यक्तित्वबाट प्रभावित भएको थिएँ। उनको उज्यालो अनुहार आज पनि मेरो आँखा अगाडि नाचिरहेको छ। तर दुर्भाग्य, त्यो अनुहार, त्यो बोली, त्यो व्यक्तित्व सबै कतै विलीन भएको छ। अङ्ग्रेजी भाषामा मिसिएर आउने उनको नेवारी...
मुटुविहीन मान्छेको मुटु ठीक गर्दा
३० जेठ - चार्ल्स भारतको तिहाड जेलबाट भागेका थिए। पुनमका पिता सोही जेलको एक कनिष्ठ अधिकारी थिए। उनले सो घटनबारे सुनेकी थिइन्। उनको पिताले भोगेको तनाव र बिताएको अनिदो रात एक कलिली केटीको रुपमा उनले प्रत्यक्ष देखेकी थिइन्। अहिले उनको पति त्यही कुख्यात व्यक्तिको चर्चा गरिरहेको थियो।
२९ जेठ - प्रचण्ड दैनिक १८ घण्टा खटे, कहिले त एकै दिनमा दर्जनौं कार्यक्रम भ्याए। बालुवाटारमा हुने साना–ठूला मिटिङहरू पनि राजनीतिक सहमति र समृद्धिकै उद्देश्यमा केन्द्रित हुन्थे। बिहान ७ बजेबाट सुरू भएको भेटघाट राति ११ बजेसम्मै चल्थ्यो। तर प्रचण्डले कहिल्यै पनि थकानको सुस्केरा हालेको मैले अनुभूत गरिनँ। बरू,...
सीताराम कट्टेल 'धुर्मुस'
‘मानिस बन्न अरुका लागि बाँच्नुपर्छ’
२२ जेठ - मानिस बन्नका लागि अरुका लागि बाँच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यही उद्देश्यले तानेर होला तुच्छ आरोप, गाली र अपशब्द सुन्दा पनि खासै चित्त दुख्दैन। बरु झन् मन प्रफुल्लित हुन्छ। अझ जाँगर थपिँदै जान्छ। हामी स्वार्थी छौँ, तर त्यो स्वार्थ भनेको देश बनाउने र विश्वमा नेपाललाई चिनाउने हो।
प्रचण्डलाई उदाहरणीय काम गर्ने अवसर
११ जेठ - जित्नेको इतिहास लेखिन्छ, हार्नेको उपन्यास। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपाली राजनीतिको मैदानमा दुई दशकयता सबभन्दा धेरै सुनिएको नाम हो। यसबेला पनि सबैको ध्यान उनीतिरै छ, मानौँ उनी फुटबल मैदानमा ‘फ्रि किक’ हान्न तयार स्ट्राइकर हुन्। उनी त्यसमा सफल हुन्छन् कि चुक्छन् भन्ने प्रतीक्षा भइरहेको छ। अझ...
नानीमैयाको जित र किसुनजीको हारका खास कारण यस्ता थिए
१० जेठ - काठमाडौँ महानगरपालिका र ललितपुर उपमहानगरपालिकाका चुनावी नतिजा आउँदै गर्दा काठमाडौँ र ललितपुर जस्ता ठाउँका मतदाता विवेकहीन हुन् भनी उनीहरूमाथि खनिने क्रम बढेको छ । यस क्रममा दुईवटा घटना उल्लेख गरिएका छन्।
८ जेठ - स्थानीय निकायमा मतदान भएको नौ दिन नाघिसकेको छ। यो चुनाव अगाडिदेखि नै सबैभन्दा चर्चाको केन्द्रमा छिन् चितवनमा मेयर उम्मेदवारी दिने रेणु दाहाल। मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा उनले बोक्ने राजनीतिबारे कतै चर्चा छैन। उम्मेदवारका रूपमा उनको विचारमाथि कसैले बहस गरेको छैन। बरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल...
ईर्ष्याको ठीक अघिल्तिर
२३ बैशाख - चाहेका हरेक कुरा तिमीले खुट्टा बजार्दैमा पाउँछौ। त्यसैलाई पाउन म युद्धमा होमिनुपर्छ, जीतहार जे पनि हुन सक्छ। तिमीले बसेर नै ती सपनालाई विपनामा चुम्न पायौ र म दशनंग्रा खियाएर, धसारेर हिँड्दा तिनको छेउसम्म पनि पुग्न पाइनँ।
१८ बैशाख - हरेक बिहान जब समाचार हेर्न थाल्छु, आँखाको ढकनीमा त्रासको मैलो पर्ला कि भन्ने डर लाग्छ। लाग्छ, कतै पनि चुनाव बिथिलिने समाचार पढ्न नपरोस्। जति चुनावको दिन नजिक हुँदै जान थाल्यो उति उत्साह र शंकाको मिश्रित भावमा हिँडिरहेछु।
देशै एक हुने बेला पार्टीहरूभित्रै किन गुटैगुट?
१३ बैशाख - आउँदो माघसम्म तीनवटै निर्वाचन सम्पन्न गरेर नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा छ देश। संविधान संशोधनलाई प्राथमिकता दिने मधेसकेन्द्रित दल र संशोधनबिनै चुनावमा जान खोज्ने प्रतिपक्षी एमालेको कडा अडान सँगसँगै छ। यस्तो बेलामा चौबाटोमा उभिएर ‘के गरौं कता जाऊँ’ अवस्थामा कांग्रेस छ...
वैकल्पिक राजनीति भावना हो र?
९ बैशाख - युवालाई सक्षम बनाएर राजनीतिमा स्थान दिनुपर्छ हतार गरेर होईन। रन्जुको हकमा योग्यता र उत्कृष्टता अझै जरुरी छ। सामाजिक मिडियामा उनको उमेदवारीको जोडदार वकालत गर्नु भनेको उचाईमा जाँदै गरेको महिला आन्दोलनको नज़र अन्दाज़ गर्नु हो। महिलाहरु भावनाको पात्र मात्र बनेर हो कि उत्कृष्टता पनि लिएर आउनुपर्छ?...